I-Semalt: Izindlela eziphumelelayo zokungena kwi-Traffic yangaphakathi ku-Google Analytics
Enye yeziphambeko ezilula kakhulu izinkampani, izinhlaka, kanye nabantu ngabanye abangabheki uma kuziwa ekubaleni inombolo yabo yanyanga zonke ukufakwa komgwaqo kumawebhusayithi abo abaklayenti. Kungase kubonakale kungabalulekile, kodwa kunendima enkulu okufanele idlale ekutheni izinga lokuguqulwa, njengoba lifakazela umgwaqo abawuthola kubavakashi.
Kunezindlela eziningana, ezichazwe ngu-Andrew Dyhan, iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende Semalt Amasevisi Wezindiza, ongayisebenzisa ukuze kunciphise le nkinga. Ivela ekufakweni okulula kuya kulabo abadinga izinsiza zokuthuthukisa ukuze ziqalise. Into eyodwa okumele uyikhumbule ihlale ikhona i-akhawunti ehlukile ye-analytics lapho umuntu angagcina yonke idatha eluhlaza njenge-backup.
Isikhangiso se-Google Analytics Opt-Out Isiphequluli se-# 1
Faka okungeziwe kuwo wonke amaphrofayli womsebenzisi, iziphequluli, nawo wonke amadivayisi anesiphequluli. Futhi, khumbula ukuthi ukungeza kuvuliwe kuwo wonke amaphrofayela. Ngakho-ke, uma iphrofayli yamanje esetshenziswayo yiyona egijima ukuhlolwa, bese ushintshela iphrofayili ehlukile noma ukhubaza okungeziwe ukuze ubone ukuthi ukulandelela kusebenza kahle.
# 2 Izihlungi ngokwezifiso Ngokusekelwe ku-IP
Ikheli le-IP elilodwa :
Iya kuthebhu ye-Admin ku-GA, bese ukhetha izihlungi. Kulezi, khetha ukwengeza isihlungi esisha kusuka kuthebhu yokuhlunga. Kusuka lapha, faka isihlungi esingokwezifiso usebenzisa ikheli elilodwa le-IP. Ngemuva kokuhlela imingcele, chofoza ukulondoloza bese uphuma..
Ububanzi bekheli le-IP:
Landela inqubo efanayo yamakheli angashadile we-IP. Kodwa-ke, ngemuva kokukhetha isihlungi esisha, khetha isihlungi esiyinkimbinkimbi kuhlobo lokuhlunga, futhi ukhiphe i-IP kwinsimu yokuhlunga engabandakanyi. Okokugcina, faka ububanzi be-IP kufomethi yokuhlunga.
# 3 Izihlungi ngokwezifiso Ngokusekelwe ku-ISP
Ukungahambisani nomgwaqo kusuka ku-ISP kungase kube nge-predefined noma isihlungi senkambiso. Ngendlela efanayo, umuntu angayinaki i-ISP esuka ku-GA. Kungakhathaliseki ukuthi isebenzisa isizinda se-ISP noma i-ISP. Umehluko wukuthi umuntu ubhekisela egameni elibhalisiwe njengenkinga ye-ISP, kanti enye isho isizinda se-ISP. Isihlungi esinqunyiwe sivumela kuphela ukuthi umuntu asebenze nge-ISP domain.
Sebenzisa inqubo efanayo yamakheli e-IP, sebenzisa isihlungi esichazwe ngaphambilini kusihlungi, bese ubeka eceleni isizinda se-ISP.
Uhlobo lokuhlunga kufanele lube isihlungi esingokwezifiso, bese ungafaki inhlangano ye-ISP enkampini yokuhlunga. Bese ufake isizinda sayo "kusukela ku-ISP Domain."
Lezi zindlela ezimbili ozisebenzisayo yi-SetVar ne-setCustomVar . Umehluko phakathi kokubili yilokuthi _setVar isebenzisa insimu yomhlahlandlela womsebenzisi futhi i-last isingakwazi. _setVar ivumela umsebenzisi ukusetha ukuhlunga kwephrofayela abangayisebenzisa ukukhipha ithrafikhi yomuntu siqu. Okunye _setCustomVar isebenzisa izingxenye ezithuthukisiwe ezenza kube lula ukuhlunga i-traffic. Kusho ukuthi idatha ehlunga kuyo ifika ngemuva kokuthi ihambe nge-GA.
_setVar : setha isihlungi esingokwezifiso kuhlobo lokuhlunga, kufanele kube yinkambu ehlongozwayo yomhlahlandlela womsebenzisi bese usebenzisa isisebenzi njengendlela yokuhlunga.
_setCustomVar : ngaphandle kokuhluka kwesimo (ukhiye 1), bese ukhetha labo abalingana ncamashi nesisebenzi. Bese uhlanganisa ukuhluka kwesiko (Value 01), futhi ufanise Yebo.